Esorin’ny Ebôlà amin’ireo Afrikàna ny kolontsainy sy ny soatoavina maha-olona an-dry zareo · Global Voices teny Malagasy
"Fomba efa lany andro sy tsy iriana"hoy ny OMS
Voadika ny 27 Jolay 2020 15:18 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Español, Deutsch, 日本語, Ελληνικά, English
Ilay mpahay fiarahamonina sady mpandalina momba ny olombelona, Ginny Moony, no manazava ny fomba nanesoran'ny Ebôlà tamin'ireo Afrikàna ny maha-olona an-dry zareo :
Tsy mitovy mihitsy ny fomba fikarakaran'ny Afrikàna sy ny Tandrefana ireo marary sy maty any amin-dry zareo, voalaza fa miavaka amin'ny an'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Tena marina loatra. Manerana ny tany, ny tena antom-pisian'ny fikarakarana ny marary dia azo lazaina ho mitovy: zavatra voajanahary ny mikitika ireo olona marary na maty ao anatin'ny fianakaviana. Manerana izao tontolo izao dia diovina ny maty ary avela ho taza-maso eo ny razana mba hahafahan'ny fianakaviana sy ireo olom-pantatra manao veloma farany azy. Any Pays-Bas, azonay atao ny mitazona ao amin'ny efitrano fandraisambahiny mandritra ny andro maromaro ireo havanay nodimandry. Ary dia misy ny fifampikasohana mivantana amin'ilay nodimandry mandra-panidy ny vatampaty sy ny fanitrihana azy na ny famindràna azy ho any amin'ny toerana fandoroana.
Ho an'ireo firenena tratry ny valanaretina Ebôlà, nahilika ireo fomba fanao amin'ny maha-olona satria nolazain'ny OMS sy ireo manampahaizana mandalina momba ilay valanaretina ho toy ny “fomba efa lany andro sy tsy iriana”. Tsy misy olona mametraka fanontaniana hoe rariny sa tsia ny tsy famelàna ny olona hikarakara ireo havany akaiky, sy ny tsy fanomezana zo azy ireo hisahana ny dingana mankany amin'ny fandevenana. Mazava ny vahaolana mba hisorohana ny olona tsy ho tratry ny Ebôlà: tsy mikitika, na inona na inona antony. Tsy noheverina ireo ho vahaolana mba misy fangorahana kokoa, toy ny fanomezana fitaovana fiarovana ho an'ireo olona ao anatin'ny fianakaviana mba ho afaka mandevina ny havany izy ireo, na misy mitarika an-dry zareo. Atao anjorom-bala ny vahoaka, rehefa tsy manaiky ny hiara-hiasa dia alefa any am-ponja. Vao mainka mampanalavitra kokoa ny vahoaka amin'ireo manampahefana ireny fepetra henjana ireny. Kapoka ny Ebôlà. Tsy ho an'ny vondrompiarahamonina iraisampirenena, tsy ho an'ireo pôlitisiàna, tsy ho an'ireo sangany, fa ho an'ireo vahoaka mahantra irenry ihany. Mahatsiaro ho irery ny vahoaka. Nilaozana. Tonga avy any ny volabe mikararàna, betsaka ny fanohanana tonga , fa mbola miha-mahazo vahana isanandro eny an-kianja ihany ilay valanaretina….
Ny ady ataon'i Afrika Andrefana hanakànana ny Ebôlà (#StopEbola)
Tantaran'ny Ginea farany
Fahalalahàna miteny 30 Desambra 2020
Liberia 27 Jolay 2020
Fahasalamàna 27 Jolay 2020